Phandeeyar Tech Page 2
Posted September 29, 2017 by by Hsu Yee Htike
Freemium Model / အမြည်းပေး အရောင်း ပုံစံ သင့်မှာ နွားတစ်ကောင် ရှိသည်။ နွားနို့ကို အခမဲ့ အမြည်းပေးသည်။ နွားနို့ထည့်သည့် ဘူး အတွက်သာ ပိုက်ဆံ ယူသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအချို့အား အခမဲ့ အမြည်းပေးပြီး အပိုဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ Skynet (free to air channels), Candy Crush,… Read more »
Maker MeetUp: Be A Successful Maker
Posted September 28, 2017 by by Hsu Yee Htike
This month’s Maker Meetup invited3speakers to inspire the participants. “Be A Successful Maker” isaunique topic which talked aboutarange of topics. Ko Min Soe, a… Read more »
Posted September 27, 2017 by by Hsu Yee Htike
Phandeeyar Accelerator and Telenor Myanmar held an exclusive event on Thursday, 21 September onanew digital payment solution by Telenor. The event received two representatives from Telenor Digital: Karl… Read more »
13 rules for startups
Posted September 21, 2017 by by Hsu Yee Htike
၁။ တွဲဖက် တည်ထောင်သူတွေကို ကောင်းကောင်း ရွေးချယ်ပါ။ / Pick good cofounders အိမ်ခြံမြေလောကတွင် တည်နေရာ အရေးကြီးသကဲ့သို့ Startup လောကတွင် တွဲဖက်တည်ထောင်သူတွေသည် အရေးကြီးပါသည်။ အိမ်တစ်ခုကို လန်ပြန်အောင် စိတ်တိုင်းကြ ပြုပြင်လို့ရသော်ငြား အိမ်၏တည်နေရာကိုတော့ ပြောင်းလို့ရမည် မဟုတ်ပေ။ Startup ရဲ့ လုပ်ငန်းပုံစံအနေအထားကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလို့ရသော်ငြား တွဲဖက် တည်ထောင်သူတွေ… Read more »
Startup Pirate Metrics – AARRR!
Posted September 15, 2017 by by Hsu Yee Htike
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုတွင် သုံးစွဲသူ၊ ဝယ်သူ များပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မှသာ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အောင်မြင်ရန် မိမိ၏ ဖောက်သည်များ၏ customer journey ကိုအသေးစိတ် တိုင်းထွာလေ့လာရန် လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းတို့မှ မိမိလုပ်ငန်းအား ကနဦး ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမှစ၍ နောက်ဆုံး မိမိလုပ်ငန်းအား အားပေးသည်အထိ အဆင့်ဆင့်တိုင်းကို ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ကြိုးစားသင့်သည်။ Startup pirate metrics… Read more »